Haddii aad ku sii nagaan karto xaalad xaalad xun, waad guuleysataa. - qarsoodi - Quotes Pedia
Quotes Xaalada adag
Wejiga xigashooyinka Xaaladda
Quotes Xaaladda taban
Xigasho kusaabsan Xaaladda Xun ee Nolosha
Xigashooyinka dhabta ah ee ku saabsan xaaladaha nolosha
Joogso Quotes Sawirada Wanaagsan
Iskuday inaad Joojiso xigashooyin Wanaagsan
Erayada Xikmadda Ku Saabsan Xaaladaha Nolosha
Xaaladda xun ee xigashooyinka nolosha
Quotes Xaaladda Xun
Samir. Boqortooyooyinka lama dhisin maalin. - Qarsoodi
Dulqaad, waqti ayey qaadataa in wax walba dhacaan. Waa muhiim in la fahmo in waxna aaney dhicin habeennimo.
Ahaanshaha qof jacaylkiisii ​​ugu horreeyay waa weyn yahay, laakiin noqoshada qof jaceylka u dambeeya waa kaamil. - Qarsoodi
Jacaylku wuxuu ina sii wadaa nolosha. Waxaan la kulanay dad kala duwan oo nolosha ah, laakiin waxaan aasaasnaa xiriir ...
Noloshu waa u dhaqaaqista, aqbalida isbeddelada, iyo in aan sugno waxa kaa dhigaya mid sii xoog badan oo dhameystiran. - Qarsoodi
Noloshu waa u dhaqaaqista, aqbalaadda isbeddelada, iyo in la sugo waxa kaa dhigaya mid sii xoog badan oo dhammaystiran.…